लकडाउन डायरी- बिचित्रकाे मन ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रिय मन! तिम्रो गति कति तेजस्वी छ है ! कति चाडै यो सारा पृथ्वी भ्रमण गर्न सक्छौ । न कसैले रोक्न सक्छ । न कसैले छेक्न सक्छ । तिम्रो वेग मापन गर्न कुनै वैज्ञानिक सफल छैनन् । न कुनै ज्योतिषी नै ! संसारमा कति वैज्ञानिक जन्मे र विज्ञानको आविष्कार भयो । त्यसमा जति पनि अध्ययन , अनुसन्धान गरे ती सबै मानवीय मस्तिष्कको उपज थिए। जस्तै:- भौतिक विज्ञान,,रसायन विज्ञान,,जीव विज्ञान, मनोविज्ञान साथै ज्योतिष विज्ञान पनि । तर यिनीहरू मध्ये कुनै पनि यस्तो विज्ञान बन्न सकेन । जसले मानवीय मनको गति, वेग, गहिराई उचाइ अहँ! कुनै पनि कुरा यति र यही सम्म हो भन्ने कुराको तथ्य कहिले कोही बाट पनि पुष्टि हुन सकेन।
‘मन’ त केवल साहित्यकार अनि लेखकको कलममा मात्रै सीमित रह्यो । उनीहरूले भने मनका विषयमा अथाह कलम चलाए । मनमा लाग्ने चोटको गहिराई अनि पीडामा हुने दुखाइको अवस्थालाई केवल शब्दको सहारामा सबैलाई थोरै भए पनि अनुभव गराए । तर यो पुष्टि योग्य भने होइन। यसै मनका कथा व्यथा समेटेर कति कबिले काव्य तयार गरे होलान् । कतिले कथा कविता लेख रचना तयार पनि गरे होलान्। तर यति चमत्कार गर्ने विज्ञानले यसको अस्तित्व के कति छ ? भन्ने कुराको यथेष्ट प्रमाण जुटाउन सकेन । तर यति अवश्य भन्न सकिएला कि, बेगम ‘मन’ हावा भन्दा पनि तीव्र,गहिराइमा ‘मन’ महासागर भन्दा पनि ज्यादा,उचाइमा ‘मन’ आकाश भन्दा पनि अधिक विशालता ‘मन’ धर्ती भन्दा पनि बढी, यस्तो मन आखिर निहित त मानव मै !
हामी सबैलाई थाहा छ । मनको स्वतन्त्र अस्तित्व त छैन । मानवमै यसको अस्तित्व निहित छ । तर गहन विषय यो छ कि, मानिस फेरि मनको नियन्त्रणमा रहन्छ। यदि मनले अधिक चाह्यो र मानिसले आफ्नो जीवनकालमा त्यसलाई प्राप्त गर्न जस्तो सुकै परिस्थिति पनि पार गर्न डराएन भने मानिसलाई सफलताको चुलिमा पनि पुर्‍याउन सक्छ । अर्थात् तीव्र इच्छा शक्तिका कारण मानिसले हरेक कुरा प्राप्त गर्न सक्छ । मन मान्छेको त्यो अदृश्य शक्ति हो । जसलाई माया प्रेम सद्भाव जस्ता कुराहरूले ढाकेर राखेको हुन्छ । तर यहाँ भित्र विभिन्न नकारात्मक कुराहरू पनि लुकिछिपी बसेका हुन्छन्। जब मानिसमा माया प्रेम सद्भाव जस्ता भावहरू मन मा सक्रिय भएर रहन्छ । त्यति बेला सम्म नकारात्मक भावहरू निष्क्रिय भएर रहन्छ । तर सबै समयमा मानिसको एकै अवस्था रहँदैन । किनकि मानिस घर परिवार आफन्त समुदाय समाज सँग मिलेर बसेको हुन्छ । उसका जीवनमा अनगिन्ती आरोह ,अवरोह आइरहन्छन्ती । यावत कुराले मनलाई धक्का पुर्‍याइरहेको हुन्छ र आहत पनि! यदि बाहिरी वातावरणले मनको भावमा हलचल पुर्‍याइ रहेछ भने त्यहाँ दुवै प्रकारको भाव उत्पन्न हुन सक्छ।
१)सकारात्मक भाव:- जसमा माया, प्रेम, सद्भाव,खुसी, हर्ष आफ्नोपन इत्यादि यस्तो भावले मानिसमा ऊर्जा थपिरहेको हुन्छ । जसले अरूलाई नोक्सान गर्दैन मानसिक रूपमा पनि मानिस बलियो बनेको हुन्छ । सबैलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको हुन्छ।
२) नकारात्मक भाव:-जसमा घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, विवेकहीनता इत्यादि। यस्तो भावले आफूलाई त मनोवैज्ञानिक रूपमा दुर्बल त बनाउँछ नै त्यसमा अरू कोही पनि ती भावबाट पीडित हुन सक्छन्।
यी अनि यस्ता भावहरूले मानिसको मनलाई नियन्त्रण गरेका हुन्छ । परिस्थिति समय अनि अवस्था अनुसार दुवै किसिमका भाव उत्पन्न हुन्छन् र मानवीय क्रियाकलापलाई असर गर्दछन । मानिसका हरेक अभिव्यक्ति कार्यलाई पनि मनको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। मान्छेले बहकिने मनलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने दुर्घटना त्यसले सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक परिणाम दिने गर्छ । जसका कारण मान्छे गलत कामको भागीदार हुन पुग्छ ।
मान्छेको यो विचित्र मनलाई नियन्त्रण गर्न हरेक समय उसले सकारात्मकता र सृजनशीलतामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मन भित्रको क्रान्ति नियन्त्रण गर्न नकारात्मक भन्दा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पाठ्यपुस्तक,उत्प्रेरणा मूलक शास्त्र, सङ्गीत अनि दर्शन, विज्ञान, योग ध्यानमा ध्यान दिन जरुरी पर्छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउनमा मान्छेहरू बेकामे जस्तै बनेको अवस्थामा त उल्लेखित कुराहरू झन् अवलम्बन गर्न पर्ने देखिन्छ । छिन छिनमा मन बदल्न भन्दा पनि स्थिर मन हुन जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा नैतिक शिक्षाको बढी आवश्यकता पर्दछ । मनलाई डिस्प्रेसनमा जान नदिन एक्लोपन महसुस हुन नदिन सामूहिक परिवारमा बस्ने, परिवारका सदस्यहरूमा भावनाहरू आदान प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ । हरेक पटक आफूलाई सृजनशीलतामा तर्फ उन्मुख गर्दै व्यस्त भयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । तसर्थ विचित्रको मनलाई बहकिने दिनबाट जोगाऔँ । सुरक्षित रहौँ । व्यस्त रहौँ ।